Ikhaya elipholileyo w eGadini kufuphi noLwandle - I-Airbnb
Ikhaya elipholileyo w eGadini kufuphi noLwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBam
Iyilwe ngumakhi wasekhaya, indlu yam iqaqambile, imnandi kwaye ipholile! Ihonjiswe ngezinto zakudala zaseAsia kunye noyilo lwangoku, i-terrace ijonge igadi eluhlaza.
Nge 3min. ukusuka elwandle, iindawo zokutyela & negrosari. Ndiza kuboleka ibhayisekile yam (5min. ukuya eCicada/ Khao Takieb).
*ikhethwe yiBK Magazine njengenye ye'10 zezona Airbnb zibalaseleyo nezifikelelekayo eThailand'!
*kwakhona jonga olunye udweliso lwam («3 pax).
Umgangatho ophantsi unokuphila kunye ne-TV kunye ne-Netflix kunye ne-DVD, imihlobiso ye-antique yase-Asia equka i-Balinese, i-Indian kunye ne-Thai yokhuni, i-postcards endala ye-Hua Hin kunye nomzobo wetempile. Isiqithi sasekhitshini esenziwe ngamaplanga silungele ukwabelana ngesidlo sakusasa esilungiselelwe ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho ishawari yesibini phantsi, kunye nendlu yangasese. Izitulo ezibanzi ezingaphambili zegumbi lokuphumla zijonge isitiya esichumileyo esinemithi yefrangipani, isundu sebhanana, amayeza etropikhi njl.njl., kwaye inetafile ehlala ukuya kutsho ezintandathu kwindawo yokutyela ngaphandle.
Igumbi lokulala linomgangatho we-tropical hardwood kunye nesilingi ephezulu enokukhanya okungathanga ngqo. Iipaneli ezityibilikayo zinokwahlula eli gumbi kubini, zinika ubumfihlo bobabini kwabo bahlala kwibhedi yobukhulu bokumkanikazi kwelinye icala kunye nebhedi etofa kabini yesofa kwelinye. Icala ngalinye lineedyuvethi kunye nemiqamelo, iifeni zesilingi kunye neA/C. Kukho igumbi lokuhlambela elinesitayile, indlu yangasese kunye negumbi elivaliweyo elivaliweyo. Isitulo esonqena kwibalcony ngaphambili sijonge iinduli ezinamachokoza etempile mgama.
4.82 · Izimvo eziyi-317
Ubumelwane busondele kakhulu elwandle kwaye kufuphi neetempile zendawo kunye neelwandle. Kukho iimarike ezincinci kunye neevenkile zasekhaya eziyimfuneko, kunye neendawo ezininzi zokutya ezisisiseko zasekhaya.
Imakethi yeCicada iku-1.4km kude kunye nepaki yamanzi eVana Nava 2.4. Ndisuka e-Khao Takieb ngokwam, kwaye kwiindwendwe zam ndiqulunqe uluhlu lwezinto endizithandayo-ukuzibona kunye neendawo zokutyela e-Hua Hin najikelele.
Umbuki zindwendwe ngu- Bam
Ndihlala eBangkok phakathi evekini kodwa ndichitha iimpelaveki ezininzi eHua Hin, ukuze sidibanele khona. Ukuba andinguye, ungandifumana nangaliphi na ixesha kwaye uqhagamshelane nomphathi wam ukukunceda ukuba uhlale ukonwabela kangangoko.
Ndishiye isikhokelo sendlu kunye neselumelwane, esineengcebiso malunga neendawo zokutyela kunye nokubona indawo, ukuze uyonwabele indawo njengendawo yasekhaya.
Ndinomphathi othetha isiNgesi kwaye oza kukunceda uzinze. Ufowunelwe ukusabela kwiimfuno zakho ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Isicakakazi sam sihlala singena ukusuka ngoLwesine ukuya kutsho ngoMvulo ukuze sicoce (ngaphandle kokuba awufuni yena) kwaye sihoye igadi.
Ndihlala eBangkok phakathi evekini kodwa ndichitha iimpelaveki ezininzi eHua Hin, ukuze sidibanele khona. Ukuba andinguye, ungandifumana nangaliphi na ixesha kwaye uqhagamshelane n…